umkhondo 12: Zonke Uthando Lwam — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Ndibona ukuba ukubukela
Ngaba ungathanda ukuba ubona?
kakuhle, sorta kinda mhlawumbi
Yintoni na ke engqondweni?
ubuso bakho ukhangela eziqhelekileyo
Ndibona wena lonke ixesha
Yaye ndakukwazi ukuwugcina ukuba inkampani ngokuhlwanje
Wu no va akuxeli
Ngaba mntu wumbi ngeenxa ukubukela
Yeah yitsho nje ilizwi kwaye onalo kuyo
Kwaye ufuna uthando kwi kumnatha
Umntu uneentswelo, oko ukulindeleyo?
Walunguza onke amaphepha abo
Ke kaloku bafumana indoda yakhe waphulukana nokuphefumla kwakhe
Cause ukuba uthando kule emehlweni lokuqala xa badibana
intliziyo yakhe ibetha ngamandla
Yena kinda ukukhanya ngebala, amehlo ngokungathi wazithanda
Ayikwazi alwe nabo iimvakalelo xa akubethe oku kunzima
Yinto umgama omde, ngoko ke kunye naye intanethi lonke ixesha
Nguye emsebenzini kodwa le ntombazana Yiloo engqondweni yakhe ngalo lonke ixesha
Akanakuba alinde ukumbona, wavuka ke iimpawu enga
Xa bebonke ke abanangxaki yena funeke umvuzo kunye Visa
homies bakhe bamlumkisa “isantya laa mfazi akakwazi kuyizalisa kuwe”
Kodwa ukuba kuloo mdlalo uthando ke Andifuni ukuhlala bleachers
Okanye ke ucinga, Yintoni Ndilibele Ndithi
Jay utshatile kwaye ebimele intliziyo yakhe ukuba itshixelwe
Ndiyathandaza makayiqhawule kodwa uye buthathaka ngaphakathi
Ke yena Ndingathanda kulahleka xa unokuphinda ukubona wakhe, nguye bonke
Kuba ndi yintoni na ekufuneka
Kwaye ufuna ukuba, Ufuna ukuba
Cause bendikhe ndilinde wena ukususela kusasa
Kwaye ndiyakuthembisa konke uthando lwam
Ehleli apha elindele kuza ukufumana kuwo nje, Yifumane
Zonke uthando lwam
Ehleli apha elindele kuza ukufumana kuwo nje
Hey akayi zange ndibone umntu ubuso ukumazi kunye ilungelo lakhe esinqeni
Ayikwazi ukulwa lokufuna, wayesoloko wadibana naye kwisayithi enye
inkwenkwe wakhe wamxelela axelele umfazi wakhe kuba oku ekunene
waye ke yoyika, ekugqibeleni wambamba baza kulwa
Amagama bananise Ubawela “yintoni le kwentlawulo ukuba sele ukukopa
Ngaba sele ebona ezinye broads?”
Uye kinda uvaleleke ngoku ke ezingqina phantsi
Uye uziva ngathi kufuneka ayichitheki zonke izibakala ngoku
Kwaye ke uthi kuye, 'kwinkxalabo lover yakhe eyahlukileyo
Enamatheleyo yakhe ngendlela uye imifanekiso wakhe usoloko eyeing
Yeyona nomkhwa nto ingendawo ufuna ukulungisa oko
Kodwa imvakalelo kuye, uye ngokwenene iqhutywa yena uqalisa uyazibuza
Ingaba oku kuyingenelo? Kuba umfazi wakhe wathi funeke akhethe
Ubawela, "Yinto okanye mna nosapho lwakho kwinkxalabo nokuwanqika"
Ngoku Jay wayifumana blues, ufuna ukukhala
Cause uthando loo mfazi mhle kwikhusi
dude My Jay enze iindlela emnqamlezweni
Uve ukuba uvuyo nolonwabo, kodwa walahlekelwa abo
Uziva ngathi umphefumlo ezilahlekileyo lihla ngendlela engalunganga
"Andizange njani apha?"
Nguye ngalo lonke ixesha lakhe eliphantsi
Ke ngoku nto bedanduluka bedanduluka
Enxunguphaliswe ezifana, "Njani nokuba ningandifumani ngaphandle?"
Wa khumbula ukuba uThixo yena ukusuka nje isisu
isono sethu ongendawo yena usiqeqeshela ukwaphula kuthi ngayo
Ngoku Umbetha iinzulu ukwaphuka ke wabangela
Indlela buhlungu iNkosi bakhe waxhonywa kuloo emnqamlezweni mdaka
Indlela wenzakele umfazi wakhe yeesms bakhe neziphene ndakugwenxa
Mhlawubi hamba Ulahlekwe nosapho lwakhe, ngoko wa nqumama
Ithatha laptop wakhe umfanekiso wakhe phezu sizoku
Waphula loo ngehamile uthabatha enkukumeni ngaphandle
Umbiza umfazi wakhe yaye uye oguqukayo ngeenyembezi
Kwaye uthi ufuna ibinokwenziwa iminyaka
Tish • EtiMnga 8, 2014 ngexesha 2:33 pm • impendulo
Oko akuthethi kuthi “kwaye ngoko ke dance dance kodwa Ndilibele ndithi, etc…”? Oku kuvakala ngathi phinda into kabini.
ukudanisa • UCanzibe 26, 2016 ngexesha 11:03 pm • impendulo
Le ngoma wathetha ngako ngokucacileyo kum. Ndasokola nge iPorn ixesha elide. Mna useza ehendwa ngamanye amaxesha kodwa uThixo bafumane ndim ngenxa. Mna zehla iinyembezi xa usiva le ngoma kuba nangona andiyi nditshate okanye nantoni Nangoku ndisazibuza nditsho ulwalamano. Enkosi kakhulu zokwabelana le ngoma!